ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကျနည်း- အားဖြည့်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုချက်များ
ဧပြီလ 29, 2022 မေလ 1, 2022
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ကူညီပေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းက ဘာလဲ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။
ဘယ်အားကစားက ကိုယ်အလေးချိန် အများဆုံး ရှုံးလဲ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ဝိတ်ကျပြီး ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ပိန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကွာခြားချက်
ဘာက ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျစေတာလဲ။
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာတွေစားရမလဲ
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဘာကြောင့် အရမ်းခက်ခဲရတာလဲ။
စာဖတ်ချိန်-6မိနစ်
သေချာပေါက် လေ့လာပြီးသွားပြီ ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့်၊ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအရာသည် လူများစွာ၏ ဆန္ဒဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အများစုသည် ဤအရာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မသိကြဘဲ ဤဆောင်းပါး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို ပြသရန်၊ သင်ကြားနည်းကို အတိအကျ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဝိတ်ကျ အချိန်တိုအတွင်းနှင့် ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့်။
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျရန်နှင့် အမြဲကျန်းမာစေရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို အားကောင်းစေရန် ကူညီပေးသည့် အပူချိန်ထိန်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ကွဲပြားခြားနားသော ရွေးချယ်မှုများ ရှိပါသည်။
ဤတွင် သင်သည် ၎င်းကို လက်တွေ့ကျပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် အရေးကြီးဆုံးသော အကြံပြုချက်များကို သင်သိပါလိမ့်မည်။
dhea 100mg ဝယ်ပါ။
R ကို $ 99,00
R ကို $ 219,00
Melatonin 5mg ဝယ်ပါ။
R ကို $ 89,00
DHEA 50mg ဝယ်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ ဘယ်သူတွေ လိုအပ်လဲ၊ တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျနည်းအပြုသဘောဆောင်ပြီး အာမခံချက်ရှိသော ရလဒ်များကို မည်သို့ရယူရမည်ကို သိလိုပါသည်။
နောက်အကြောင်းအရာတွင်၊ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်အချို့ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ကွမ်းခြံကုန်း အချိန်တိုအတွင်း ကျန်းမာစေပါသည်။
A ကိုယ်အလေးချိန်ကျ တစ်ပတ်အတွင်း ပြေးခြင်းနှင့် ပြေးခြင်းကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်အဆီများကို လောင်ကျွမ်းစေသော လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစား အကြောင်းပိုမိုကြည့်ရှုပါ။ တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ နောက်ကိုလိုက်ရန်။
အခြားအကြံပြုချက်မှာ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် အဆီများစုစည်းမှုကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည့် သာမိုဂျင် ဖြည့်စွက်စာများ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
လျင်မြန်စွာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် ရလဒ်ကောင်းများ ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများမှာ ရေနွေးကြမ်းကို နေ့စဉ်သောက်ပြီး ရေ2လီတာထက်မနည်း သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖောရောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အလေ့အကျင့်သည် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော်လည်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး မြန်ဆန်သောရလဒ်များကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အချို့လည်း ရှိပါသည်။
နောက်အကြောင်းအရာတွေမှာ ဒီအတွက် ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ သင်သိပါလိမ့်မယ်။
သံသယမရှိဘဲ၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာတွင် အထောက်အကူ အများဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းမှာ HIIT ဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပြင်းထန်မှု ပြင်းထန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းက ဘာလဲ။ နောက်ကိုလိုက်ရန်။
>>> ဖတ်ရန် အစာစားချင်စိတ်ကို သက်သာစေခြင်း- ဆာလောင်မှုကို သက်သာစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ဖြည့်စွက်စာများ
ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားသည် နှလုံးနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို တိုးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဇီဝြဖစ် ပိုမြန်တယ်။
တစ်နာရီ လေ့ကျင့်ရေး HIIT သည် သင့်အား ပျမ်းမျှ ကယ်လိုရီ 400 လောင်ကျွမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပြီးသည်နှင့်ပင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အဆီများကို ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။
လူတော်တော်များများ မေးကြပါတယ်။ ဝိတ်ကျဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန် ကြိုးခုန်တာက တော်တော်ရိုးရှင်းပြီး ဘယ်နေရာမှာမဆို လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
နေ့စဉ် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရုံနဲ့ အဆီတွေ အများကြီး လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အားကစားအားလုံးထဲမှာ ဘယ်အားကစားက ကိုယ်အလေးချိန် အများဆုံး ရှုံးလဲ။ ၎င်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး လျင်မြန်သောကိုယ်အလေးချိန်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သောကြောင့် အပြေးသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်ပြေးတဲ့အရှိန်နဲ့ သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အပြေးတစ်နာရီကို 700 မှ 1400 ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
လိုချင်သူအများစု ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ကြွက်သားထုထည်ကို တိုးစေပါတယ်။ ကျန်းမာသည်။ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
အဓိက အကြံပြုချက်ကတော့ သင်နဲ့ တွဲပြီး လေ့ကျင့်ခန်း အမြဲလုပ်ပါ။ အေရိုးဘစ်လေ့ကျင့်ခန်း လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ခွန်အား၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ ရှိတာ၊ အစာ ပိုကျန်းမာပြီး ပိုမျှတတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအတွက် အစားအသောက်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိ ကြွက်သားများတွင် ရိုးရှင်းသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏနည်းပါးခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်များစွာနှင့် ပြည့်ဝမပြည့်ဝသော ကောင်းသောအဆီဟုခေါ်သော ကောင်းသောအဆီများ ပါဝင်နေရပါမည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းတွင် အဓိကအာရုံစိုက်သင့်ပြီး ၎င်းကိုထိန်းညှိပြီးပါက ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် အာရုံစိုက်သင့်သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမြတ် လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားများ သွေးတိုးရောဂါ ပရိုတင်းဓာတ် ဖြည့်စွက်စာ စားသုံးခြင်း။
ပိန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းဟူသော ဝေါဟာရများကို မကြာခဏ အဓိပ္ပါယ်တူစွာ သုံးသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်းဆိုသည်မှာ adipose တစ်ရှူး ပမာဏကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာအဆီ အပိုင်ဆိုတာ လူအများစုရဲ့ ပန်းတိုင်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းဟူသော ဝေါဟာရသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ကို လျှော့ချခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီ သို့မဟုတ် ကြွက်သားပမာဏကို လျှော့ချမည်ဆိုပါက၊
ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့နဲ့ တိုးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့အခါ ကိန်းဂဏာန်းတွေ ကျဆင်းသွားတာကို မတွေ့မိပါဘူး။ ကြွက်သားထု တပြိုင်နက်တည်း စိုးရိမ်စရာ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် သင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း ကြွက်သားများရရှိလာသည်ဟု ရိုးရှင်းစွာဆိုလိုနိုင်သောကြောင့် ညွှန်ပြချက်သည် တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိနေပါသည်။
ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန် ဥပမာအားဖြင့် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် ဖြည့်စွက်စာများအသုံးပြုခြင်းစသည့် မတူညီသည့်အချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ အောင်မြင်နိုင်သည်။ ဘာက ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျစေတာလဲ။.
ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ။ အစားအသောက်များတွင် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ဒါကြောင့် အစားအသောက် အကြံပြုချက်တွေက အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာစားရမလဲ အဖြစ်:
ငါး၊ အစေ့နဲ့ သံလွင်ဆီလိုမျိုး ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို များများစားပါ။
သင့်ရဲ့စားသုံးမှုတိုးမြှင့် အစာ ပရိုတင်း၊ ပိန်သောပရိုတင်းအရင်းအမြစ်များကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။
သင်၏နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံတွင် ဂျင်းနှင့်သစ်ကြံပိုးကဲ့သို့ အပူချိန်ဖြစ်စေသောအစားအစာများကို ထည့်သွင်းပါ။
>>> ဖတ်ရန် သွေးတိုးရောဂါ
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ သုံးနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား လေးမျိုးရှိပြီး အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်တွေ အားလုံးကို သင် သိနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာတွေယူရမလဲ :
Thermogenic ဖြည့်စွက်စာများသည် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြန်ဆန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို တိုးမြင့်စေသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအချို့မှာ Lipo Black6နှင့် Black Mamba တို့ကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဖြည့်စွက်.
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ကုထုံးများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးသော်လည်း ၎င်းအတွက် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက် အမြဲရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
အကောင်းဆုံး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနည်းများမှာ orlistat၊ sibutramine နှင့် fluoxetine တို့ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဆေး.
O အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်း သဘာဝ သို့မဟုတ် ဆေးဝါးဗေဒအရဖြစ်စေ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ ဤထုတ်ကုန်ကို HIIT နှင့် ပြေးခြင်းကဲ့သို့သော လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် တွဲဖက်စားသုံးရန် အရေးကြီးပါသည်။ အစာစားချင်စိတ်ကို သက်သာစေသောအမျိုးအစားတွင် ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Diuretics သည် ရေဓာတ်ထိန်းထားမှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည့် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ သူတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီပေးပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး သင့်ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ် အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ diuretic.
လူများစွာသည် မတူညီသောအချက်များနှင့် အံ့ဩမှုများကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာတွင် အခက်အခဲရှိသည်။ ဝိတ်ချရတာ ဘာကြောင့် အရမ်းခက်ခဲတာလဲ။ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော အရာများမှ အန္တရာယ်ရှိသော နေထိုင်မှုပုံစံများအထိ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန် အဓိကအကြောင်းအရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ သက်ရှိတစ်ခုစီ၏ သီးခြားလက္ခဏာများဖြစ်သည်၊ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက် ဟော်မုန်း သို့မဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာများရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းအတွက်၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ်ဦးထံမှ ပိုမိုတိကျသောအကူအညီလိုအပ်လေ့ရှိပါသည်။
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှေးကွေးခြင်းပြဿနာများကြောင့် သို့မဟုတ် ကယ်လိုရီလျှော့စားခြင်းကဲ့သို့သော မှန်ကန်သောလူနေမှုပုံစံအလေ့အကျင့်ကို မကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လည်း လူများစွာသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို မြန်မြန်မချနိုင်ပေ။
>>> ဖတ်ရန် Orthomolecular အစားအစာ: ကဘာလဲ? အဆင်ပြေတယ်? နားလည်ပါ
ဤအရာအားလုံးသည် ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်စေပြီး နောက်ဆုံးရလဒ်များသာမက ၎င်းတို့ကိုရောက်ရှိရန် စုစုပေါင်းအချိန်ကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် မှန်ကန်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် မချနိုင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တယ်၊ ဒါက အကြံပြုချက်တချို့ပါ။ ငါကိုယ်အလေးချိန်မတက်နိုင်လို့:
စိတ်ဖိစီးမှု နာတာရှည်နှင့်ပြဿနာများ စိုးရိမ်ခြင်း
hypothyroidism ကဲ့သို့သော ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ချို့တဲ့နေသည် ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်း လုံလောက်သော
သင်သုံးသည်ထက် ကယ်လိုရီကို လျှော့စားပါ။
တကယ်တော့၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လူတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ လူတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေစေတဲ့ အစားအသောက်တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
အမှန်တကယ်ထူးခြားစေမည့်အရာမှာ အစားအသောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်း လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်၏အစားအစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသတိရှိရှိရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးအစားအစာက ဘာလဲ။.
A အာဟာရပညာရေး အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စားသောက်မှုအလေ့အထနှင့် အမူအကျင့်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနည်းဖြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းမှုအား ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့် သေချာစေရန်၊ ရောဂါအန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အစားအသောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အစားအသောက်အကြောင်းနှင့် သင့်ဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကောင်းစွာနားလည်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အစားအစာစားသုံးသည့်အခါ စမတ်ကျသောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးမည်ဖြစ်သည်။
လူတော်တော်များများ မေးကြပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကောင်းမွန်သောအစားအစာ၊ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာများ စားသုံးခြင်းတို့ပါ၀င်သည့် သင့်ဘဝတွင် ကျန်းမာသောအလေ့အကျင့်များကို မွေးစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည် သင့်ဘဝတွင် အသုံးချမှုအားလုံးသည် စစ်မှန်သော၊ မြန်ဆန်ပြီး ကျန်းမာသောရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
မြင်တဲ့အတိုင်း လိုချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းတာမှုများ လျှော့ချရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်၊
ဤစာသားတွင်၊ ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစသည့်အလေ့အထများကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်၊ ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့် အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်ချနိုင်ပုံကို သင်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ဒီနေ့ ဆောင်းပါးကို ဘယ်လို သဘောကျလဲ။ ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်: ဖြည့်စွက်စာများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း အမြန်လုပ်နည်းကို နားလည်ပါသလား။
Post Author အကြောင်း
ဤနေရာတွင် ဖြည့်စွက်စာများ၊ စတီးရွိုက်များ၊ အစားအသောက်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ သုံးသပ်ချက်များစွာကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အစားအသောက်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူ အဆင့်မြင့်ပြီး ထိရောက်သော ဖြည့်စွက်စာများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အစီရင်ခံပါသည်။ သင့်ဘဝ၏ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ကြီးပွားတိုးတက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကို သင်သွားလေရာရာ၌ မျှဝေပါ။
Tags:ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း လှုပ်ရှားမှုများတစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျနည်းကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။diureticအစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာစားရမလဲဘာက ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျစေတာလဲ။တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျဖို့ ဘာတွေယူရမလဲကိုယ်အလေးချိန်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ကြွက်သားထုထည်ကို တိုးစေပါတယ်။ငါကိုယ်အလေးချိန်မတက်နိုင်လို့ဝိတ်ချရတာ ဘာကြောင့် အရမ်းခက်ခဲတာလဲ။ဘယ်အားကစားက ကိုယ်အလေးချိန် အများဆုံး ရှုံးလဲ။ဝိတ်ကျဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးအစားအစာက ဘာလဲ။ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းက ဘာလဲ။ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ။အာဟာရပညာရေးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဆေးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဖြည့်စွက်
ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် Bare Curl လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများ
Triceps ကွဲပြားမှုများ- ပြီးပြည့်စုံသော လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ
Direct Thread ကွဲပြားမှုများ- ၎င်းကို ပြုလုပ်နည်းကို ကြည့်ပါ။
ခြေထောက်ကို နှိပ်ခြင်း- အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်များနှင့် ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နည်း
Flexion ဇယား- မှန်ကန်စွာပြုလုပ်နည်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကွဲများ
Bench Press- အဖြစ်များသောအမှားများနှင့် အပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်နည်း
Dumbbells ဖြင့် Front Raise : ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နည်း
ဝမ်းဗိုက်- လေ့ကျင့်ခန်း အကြံပြုချက်များနှင့် ကွဲပြားမှုများ
တိုးချဲ့သဘာပတိ- အဓိက အမှားအယွင်းများနှင့် ကွဲပြားမှုများ
ပရိုဟော်မုန်းဓာတ်- အရည်ထိန်းထားမှုမရှိဘဲ ကြွက်သားထုထည်ကို မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်း လေ့လာပါ။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ပရိုဟော်မုန်း | ရွေးချယ်စရာ ၆ ခု
လေ့ကျင့်ခန်းအကြို- ဘယ်ဟာ ပိုအားကောင်းပြီး ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်း- ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချရန် ဘာလုပ်ရမည်ကို နားလည်ပါ။
အစာစားချင်စိတ်ကို သက်သာစေခြင်း- ဆာလောင်မှုကို သက်သာစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ဖြည့်စွက်စာများ
ကြွက်သားနှင့် ကာယကြံ့ခိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် သင်ယူပါ။
COVID ပြီးနောက် တစ်နေ့တာအတွင်း စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
Muscle Hypertrophy- အစားအသောက်၊ ဖြည့်စွက်စာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်
အစွမ်းထက်ဆုံး Fat Burners၊ အသုံးပြုနည်း
ဒေသအလိုက် အဆီကျစေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ ကြွက်သားရရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
စျေးပေါသော အစားအစာများကို ဝယ်ပါ- ပြန်လည်ရောင်းချရန် မည်သည့်နေရာတွင် ရှာရမည်ကို သိပါ။
အလုပ်နှင့်ယှဉ်သော အားကစားအာဟာရ | အာဟာရပညာရှင်ဆီ မသွားခင် ကွာခြားချက်ကို သိပါ။
ကပ်ရောဂါပြီးနောက် Thermogenic ဖြည့်စွက်စာများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်နည်း- သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို နှေးကွေးစေသည့်အရာ
ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ အကြံပြုချက် ၅ ခု။
ကြွက်သားများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ဖြည့်စွက်စာများ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Oxyelite PRO ပိန်စေ | အကျိုးကျေးဇူးများ
Lower Uric Acid High | သဘာဝကုသမှု
Ketogenic Diet အလုပ်လုပ်ပုံ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ကြွက်သားများရရှိရန် အကောင်းဆုံး ဖြည့်စွက်စာများ
ကြွက်သားတွေ အလဟဿမဖြစ်အောင် ဘယ်လို အစားအစာတွေ ပါဝင်ရမလဲ
နေ့လယ်စာအတွက် ကြွက်သားထုထည်ရရှိရန် အကောင်းဆုံးအစားအစာများ
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် ဘာတွေစားရမလဲ။
သက်သတ်လွတ်အစားအစာအတွက် စျေးကွက်မှာ ဘာဝယ်ရမလဲ
Whey Protein Pro Combat - အမြတ်အစွန်းဓာတ်ခွဲခန်း
Whey Protein - အနက်ရောင် ဦးခေါင်းခွံ
ဗီတာမင် D3 10.000 IU | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးရှိလဲ။
Venom – Dragon Pharma | လေ့ကျင့်ခန်းအကြို
Tribulus Terrestris – 1000 mg | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးရှိလဲ။
Pro Hormonal Thor - R2 သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း
Stimerex ES – Hi Tech | Thermogenic ကိုတင်သွင်းသည်။
Silymarin | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလဲ။
Rhodiola Rosea | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးရှိလဲ။
Resveratrol | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလဲ။
Relora | ဘာအတွက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလဲ။
ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း | အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် Post Cycle Therapy
Valerian Root – Now Foods (500 mg – 100 Capsules)
Probiotic – 50 Billion (50 Capsules)
မူပိုင်ခွင့်အားလုံး Sucesso Vip Empreendimentos 21.534.683.0001/37